Guddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose oo sheegay in uu dhow yahay xal ka gaarista colaadda Wanla weyn - Tilmaan Media
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali ayaa sheeegay in lagu tallaabsaday guullo hor dhac ah ka dib markii la kala qaaday kooxihii ku dagaalamaayey halkaasi.
Guddoomie Najax oo la hadlay qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Wanlaweyn ayaa digniin u diray shakhsiyadka hubeysan ee ka dambeeyay dagaal beeledyadii ka dhacay degmadaasi.
Gudoomiyaha ayaa xusay in aan la aqbali doonin in dadkii dhibaatada ka geystay Wanlaweyn in ay sii joogaan,sidaa daraadeedna gacanta lagu soo dhigi doono cid kasta oo ka qeybgashay dagaaladii dhexmaray labadaasi beelood eek u dgaalamay halkaai.
. Ibraahim Aadan Cali Najax waxa uu sheegay in uu dhow yahay xalka dagaaladii ka dhacay Wanla Weynm sidaa daraadeedna loo baahan yahay in ciidamada ay u howlgalaan gudasha waajibaadka xagga amniga ah ee ay u xilsaaran yihiin,isagoo dhinaca kalena qirau in caddaaladda la horkeeni doono cid kasta oo geysatay dhibaatooyin bini’aadanimo.
Coronavirus: WHO oo dalbatay inaan “la siyaasadeyn” fayraska Covid-19